सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग - सहकारीखबर
Share : 2,218
छरिएर रहको पुँजीलाई एकिकृत गर्दै सदस्यको रकम सदस्य माझ लगानी गर्ने, क्षमतालाई शिपसँग, शिपलाई उद्यमसँग र उद्यमीलाई सदस्यहरुको माझमा सहकार्य गराउँदै शिखर साकोस विगत वर्षदेखि नै सक्रिय रहँदै आएको छ । समय परिवर्तनशिल छ । समय सँगै हरेका क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । अझ प्रविधिमा त झनै ठुलो फड्को मारेको छ ।
मानिसको मानसिक विकास सँगै प्रविधिमा धेरै विकास गरिँदै आएको छ । हिजोको दिनमा रेडियोमा मानिस बोलेको सुन्दा छक्क पर्ने हाम्रो समाज टिभि आयो । झन् छक्क मोबाईल आयो । झन् छक्क हुँदाहुँदै भिडियो कल हुन थाल्यो । विश्वभरका मानिससँग छिन भरमा नै गफगर्न थालियो । हरेक गतिविधी देख्न पाउन थालियो । यो प्रविधिको विकासको गति थामिनसक्नु छ । अझ आज भोली हरेक घरका मानिस विदेश भएर पनि होला हरेक घरमा नेट नचलाउने मानिस भेटिदैन । सामाजिक संजालमा मानिस त्यत्तिकै व्ययस्त बन्दै गएका छन् । समाजमा सामाजिक संजालको टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । कोही यसको पक्षमा छन् भने कोही विपक्षमा । कतिले सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर फाईदा लिएका छन् । कतिले गालि, बेइज्जत हुनु परेको घटना समेत हामीले हाम्रो समाजमा देख्ने र पाउने गरेका छौं ।
भनिन्छ, विकास र विनाश सँगै आउँछ भने झै हरेक क्षेत्रमा विकास सँगै विनाश पनि आउँछ । छोराछोरीले मोबाइल चलाएर हैरान लगाएको अथवा दिनभर इन्टरनेटमै झुम्मीएको भन्ने गुनासोहरु दिनदिनै वढ्दो छ । जसरी हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमा विकास भएको छ त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि विकास हुँदै आएको छ । हिजोका दिनमा जसरी हरेक कार्य गर्न कागजको प्रयोग हुन्थ्यो तर आज डिजिटल भएको छ । विकशित देश तिर त कागजको प्रयोग हुन समेत छोडेको छ । विकासन्मुख देश तिर पनि केही हदसम्म यस्को विकास हुँदै आएको छ । विश्वलाई हिजो रेडियोले अनि टिभिले जोडेको थियो । आज आएर मोवाईलले नै आफ्नो हातमा अटाउने भएको छ । हरेकको हात हातमा विश्व जानकारी लिन सकिने भएको छ ।
आफ्नो आर्थिक गतिविधी पनि मोवाईलबाट हुन थालि सकेको छ । बैंक वित्तीय संस्था प्रविधि मैत्री बन्नु भनेको ठिकै हो तर कान्छो संस्था सहकारी जो न्युन आय भएका, विपन्न वर्ग र समुदायमा आधारित भएर सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षर गराउँदै प्रविधिको ज्ञान दिँदै सदस्यहरुलाई वित्तिय कारोबार हात हातबाट हुन्छ है भन्दै शिक्षित बनाउँदै आएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्र पनि प्रविधिमा जानु राम्रो कुरा हो । आज हामी डिजिटल प्रणालिमा उन्मुख भई रहँदा सदस्यहरुले पनि डिजिटल प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गराउनु सहकारीको सिद्धान्त भित्र पर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सुगम मुखी बन्नु र ग्राहकलाई भन्दा कम्पनी आफु नाफा मुखी बन्नु सहकारीको वृद्धिमा सहयोग पुग्नु हो । सुगम, दुर्गम नभनि सदस्यहरुको बृद्धिका लागि सहकारी लागि पर्नु, सदस्यहरुको क्षमता र सुविधा नै सहकारीको मुलध्येय हुनु र नाफा मुखीभन्दा सेवामुखी सहकारी बनिनु नै सहकारी क्षेत्रको विकास हुनु मान्न सकिन्छ । प्रविधिले मानिसलाई सहज बनाएको छ । कुनै वस्तु खरिदगर्दा क्यास सिधै खातामा पठाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा गोजिभरी पैसा बोकेर सपिङ्ग गर्न जाँदा गोजिबाट पैसा चोरी भएका घटना पनि हामीले देखेका छौं तर अव त्यो जमाना रहेन । क्यास लेस भएको छ । अब गोजिमा पैसा बोकी रहनु नपर्ने भएको छ । एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई आफ्नो मोबाईल एपबाट नै उसको खातामा पैसा हाल्न सकिने भएको छ । मोबाईलबाट नै विश्व बजारमा सामान खरिद गर्न सकिने भएको छ । मोबाईल रिचार्ज, प्लेनको टिकट, बिजुली विल भुक्तानी, फिल्मको टिकट, पसलमा खरिद गर्दा विल भुक्तानी लगायतका सेवा लिन सकिन्छ । सदस्यहरु पनि प्रविधि मैत्री बन्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
यदि प्रविधि मैत्री बन्न सकिएन भने समाजमा एक्ले हुनु पर्ने अवस्था छ । हिजो हामी बैकमा कसरी जाने ?, चेक कसरी चलाउने ?, बैकबाट पैसा कसरी लिने ?, भन्ने अवस्थामा आज सहकारीले हरेक व्यक्तिलाई बैकिङ जानकारी गराई वित्तीय साक्षार गराएको छ । ब्याज के हो ?, कसरी लिई रहेको छ ? ऋण लगानीको ब्याज कस्तो छ ? ब्याज गणना कस्तो छ ?, दैनिक, मासिक आदि कुराहरुमा । सदस्य जागरुक भएका छन् । आफुले पाउनु पर्ने ब्याज, तिर्नु पर्ने ब्याजको लेखा जोखा स्वंयम नै गर्न सक्ने हुनुले पनि सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । सदस्यको बृद्धि नै सहकारीको विकास मान्नुपर्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था र कान्छो वित्तिय कारोबार गर्ने संस्था सहकारी भएको हुँदा र प्रत्यक्ष सदस्य मुखी भएर काम गरी रहँदा सदस्यहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जोडेर समय सापेक्ष सदस्यहरुको बृद्धि विकास गराउँदै लानु नै सहकारीको मुल ध्येय बनेर रहनुपर्छ । राज्यले अबलम्बन गरेका नीति नियमहरुमा समेत सहकारी चल्नु पर्छ र सदस्यहरुलाई पनि चलाउनु पर्छ । सहकारी ऐन–२०७४ तथा सहकारी नियमावली–२०७५ जारी भईसकोको छ । सहकारी संस्थाहरु पनि ऐनको पालना गर्दै नीति, विधि र प्रविधिसहित संस्था संचालन गरेर सदस्यको हितमा काम गर्नु आवश्यकता हो ।
(लेखक शिखर साकोस, झापाका अध्यक्ष हुन्)